Ishedyuli yokukhutshwa kwe-Android P ityhilwe | I-Androidsis
Inguqulelo yokuqala yokujonga kuqala ye-Android P ngoku iyinyani. Ke ngale nguqulo intsha yokujonga kuqala ixesha elitsha liyaqala. Ukusukela oko saqala ukugxila kwiindaba zokuba inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza isishiya. Nangona okwangoku uninzi lweefowuni kwintengiso zingenayo ne-Android Oreo. Ngoku, Sele siyazi ikhalenda ye Android P.
Enkosi kule khalenda siyayibona imihla xa inguqulelo yokubonisa kwangaphambili icwangciselwe ukukhutshwa okanye xa i-Android 9.0 ekugqibeleni iza kufika. Ezi zinto sele zaziwa ngenxa yale khalenda kaGoogle.
Inyani yile yokuba inkampani ithathe umngcipheko omncinci okanye inike iinguqu ezimbalwa kulo mbandela. Kuba le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza iya kulandela indlela efanayo naleyo yeenguqulelo ezimbini zangaphambili zenkqubo yokusebenza. Imihla efanayo kakhulu kuzo zontathu iimeko.
Oku kuthetha ukuba sinokulindela ukuba i-Android P iboniswe ngokusesikweni ngenyanga ka-Agasti. Into esele yenzekile ngo-Oreo no-Nougat. Nangona okubonisiweyo kwikhalenda kukuba ukuboniswa kwayo ngokusesikweni kunye nokuqaliswa kuya kufika kwikota yesithathu.
Kumfanekiso ungabona ikhalenda. Zezi zintle kakhulu izigaba ezahlukeneyo ze-Android P Silindele ngeli xesha:
Uhlobo lokuqala lokujonga kuqala: Ukukhutshwa kokuqala kwenkqubo yokusebenza. Ifumaneka ukusuka nge-7 Matshi
Umboniso wesibini: Izakufika ngoMeyi, mhlawumbi kuGoogle I / O 2018. Ukongeza, le nguqulo iza kufika ngeNkqubo yeBeta ye-Android.
Hlola kuqala i3: Ekuqaleni kukaJuni, kunye neenguqulelo zokugqibela zee-API kunye ne-SDK. Abaphuhlisi baya kuba nakho ukulayisha uhlaziyo kuGoogle Play ngenkxaso yenguqulo entsha.
Eyesine ngaphambiliEkupheleni kukaJuni, kuya kuvavanywa uhlobo lomgqatswa ukuze lubone iimpazamo
Eyesihlanu edlulileyoEkupheleni kukaJulayi, ngokufanayo kuhlobo lokugqibela. Olunye uhlengahlengiso oluncinci luya kwenziwa
Inguqulelo yokugqibelaKwikota yesithathu yonyaka i-Android 9.0 iya kufika. Ngokuqinisekileyo iya kubonakala phakathi ku-Agasti njengakwimihla yangaphambili.
Le yikhalenda ekuya kufuneka siyithathele ingqalelo lo nyaka ngokufika kwe-Android P.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Ishedyuli yokukhutshwa kwe-Android P ityhiliwe
[APK] Ungayikhuphela njani kwaye uyifakele iNetease 2018 ngaphandle kwengcambu. AH nakwisiSpanish !!